LENA Worxx निर्माण वाहनहरु - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा खिलौने LENA Worxx निर्माण वाहनहरु
तपाईं निर्माण साइट मा मालिक हुनुहुन्छ!
LENA Worxx व्हील लोडरको साथ, तपाईं नाउरी वा स्यान्डपिटमा, समुद्र तट र घरमा दुवै आफ्नो आफ्नै निर्माण स्थल खोल्न सक्नुहुन्छ। निर्माण वाहनले धेरै सम्भावनाहरू र धेरै रमाइलो प्रदान गर्दछ, चाहे एक्लै वा तपाईंको साथीहरू सँगै। व्हील लोडर एक विश्वासी लेबरफर एलएक्सएनएमएमएक्स लाइट्रोन र 538 सेमी लामो छ।
तपाईंको सुरक्षित मजाको लागि, यो उच्च गुणस्तरको प्लास्टिकको बनाइएको छ र यसमा दुई 6mm जस्ती इस्पात अक्षहरू छन्। यो पूर्ण स्थिरता ग्यारेन्टी गर्ने एकमात्र तरिका हो, जुन यो लिफ्ट र रेत ढुवानी गर्न सम्भव बनाउँछ। 15 सेमी-लामो हातको साथ, यसको अन्त सँग जोडिएको ठूलो बाल्टीको साथ, तपाईं आफ्नो कार्यस्थलमा निर्माण सामग्री एक स्थानबाट अर्को सार्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, लोडर पनि साइटमा आवश्यक खोलिएको छेदहरूको लागि उपयुक्त छ।
लगभग 16 X 8 X7सेन्टिमिटरको आकारको साथ, बाल्टी सजिलै संग तपाईंको निर्माण साइटमा सबै क्रियाकलापहरू सम्हाल्न पर्याप्त हुन्छ। LENA Worxx व्हील लोडर विशेष रूप देखि रेत वा अन्य सतहहरुमा खेलन को लागी डिजाइन गरिएको छ। यसको लागि उहाँसँग समायोज्य Radlerarm छ, जुन एक वांछित स्थितिमा लक गर्न सकिन्छ। LENA WorxxCab पनि स्टेरिङमा सहायता गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले सटीक स्ट्रिइङ सम्भव बनाउँछ र तपाईले आफ्नो कार्गोलाई जहाँ जहाँ आवश्यक हुन्छ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ।
der लेने Worxx व्हील लोडर3वर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छ र बाहिर र घर भित्र दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्याङ्गपिटमा निर्माण वाहन प्रयोग गर्दा विशेष रमाइलो उत्पन्न हुन्छ। यहाँ तपाईंले सामग्री निर्माण गर्नुभएको छ, जुन तपाईं सजिलै ट्रान्सफर, स्ट्याक र लोड र व्हील लोडरसँग अनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं आफ्नो निर्माण स्थलमा मालिक बन्नु र स्यान्डपिट लाई एक निर्माण क्षेत्रमा मोबाईल लोडरको सहयोगबाट बदल्ने मौका पाउनुहुनेछ। LENA Worxx ले तपाइँको खेलको मजालाई सम्भव छ जुन सुरक्षित रूपमा सम्भव बनाउनको लागि ठूलो महत्त्व पनि समावेश गर्दछ। यसैले, फावल लोडर यूरोपीय संघमा उत्पादन गरिन्छ र TÜV द्वारा प्रमाणित गरिएको छ।
तपाइँको गेमप्ले रोक्न केहि पनि छैन, तपाईंको LENA Worxx पहिया लोडर लिनुहोस् र स्यान्डपिट, समुद्र तट वा तपाइँको नर्सरीलाई विजयी गर्नुहोस्। एक वास्तविक निर्माण कार्यकर्ता जस्तै महसुस गर्नुहोस् र तपाईंको निर्माण साइटमा टोन सेट गर्नुहोस्। LENA Worxx पहिया लोडर प्रयोग गर्नका लागि धेरै सुविधाहरू पत्ता लगाउनुहोस् र कार्यबाट लाभ उठाउनुहोस्। यसको ठूलो पाङ्ग्राहरूसँग, तपाईं यसलाई कहीं पनि लिन सक्नुहुन्छ र प्लेब्याकमा तपाईंको वरिपरि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। पृथ्वीमा, दुवै बगैंचामा लन वा खेल मैदानमा रेतमा, मोबाईल लोडर सजिलै प्रयोगयोग्य छ। अब गोर्खा लोडरको संसारहरू जान्न र आफ्नो निर्माण स्थल निर्माण गर्न पाउनुहोस्! LENA Worxx व्हील लोडरले तपाईंलाई पूर्ण समर्थन दिन्छ। मजा छ!
तपाईंको खेतीमा ट्रयाक्टर ड्राइभिङ!
der LENA Worxx ट्रयाक्टर तपाईंलाई खेतीमा जीवनको मार्ग देखाउँछ। यो एक विश्वासी डेतुज-फ्रेड एग्रोटोन 7250 टीटीवी ट्राक्टरलाई अगाडि लोडरको साथ छ, त्यसैले तपाइँ आफ्नो खेतीमा सबै भन्दा ठूलो कामहरू पनि सम्भाल्न सक्नुहुन्छ। यसको ठूलो टायर र बलियो निर्माणको साथ, ट्र्याक्टर इनडोर र आउटडोर प्रयोगको लागी आदर्श छ। LENA Worxx ट्रयाक्टर तेश्रो प्लास्टिकबाट बनेको छ र यसमा दुई 6mm जस्ती इस्पात अक्षहरू छन्, जसले भारी लोडहरूको अन्तर्गत लामो समयसम्म र मजा सुनिश्चित गर्दछ। त्यसैले यो समुद्र तटमा वा बालुवा र अन्य सामग्री संग स्यान्डबक्समा ट्रक्टर को मोती भर्न सम्भव छ। तपाईं आफ्नो खेतीमा आवश्यक गतिविधिहरू चलाउन ट्रक्टरको प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
लगभग 45 X 19 X 21,7 सेन्टिमिटरको साइजको साथ, ट्रेक्टरले आदर्श आकार हो जुन तपाईंको खेतीको काममा मद्दत पुर्याउँछ। लगभग 16 X 8 X7सेन्टिमिटर बाल्टीको लागि धन्यवाद, तपाईं सजिलै संग ठूलो मात्रा, बालुवा वा पृथ्वीमा ढुवानी गर्न सक्नुहुनेछ। स्विभलिंग फ्रंट लोडर हात विस्तारित राज्य मा 19 सेमी को लंबाई संग मनािन्छ। अगाडि बाल्टी, साथसाथै लोडर हात, तपाईं विभिन्न स्तरहरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ र निश्चित रूपमा पनि लक। यसले तपाइँलाई विभिन्न तरिकामा LENA Worxx ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न र तपाईलाई चाहानु भएको काम गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यसलाई दुवै स्यान्डबक्समा वा समुद्र तटमा पनि तपाईंको नर्सरीमा घरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। को ठुलो टायर भित्तामा अनुहारको अनुहारमा चिसो पानी पस्छ।
LENA Worxx ट्रयाक्टर3वर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छ र ईयूमा सुरक्षित गेमिंग मजाको लागि तयार गरिएको छ र TÜV द्वारा प्रमाणित गरिएको छ। यसको बलियो निर्माणको साथ, ट्राक्टर आकार र विश्वासी डिजाइन, हरी ट्र्याक्टरले तपाइँको खेती वा तपाईंको निर्माण स्थलमा तपाईंको नायक हुन सक्ने क्षमता छ। तपाईंको रचनात्मकता नि: शुल्क चलाउन र LENA Worxx ट्रयाक्टर को धेरै प्रकार्य र संभावनाहरु पत्ता लगाउन दिनुहोस्। धेरै गेम प्रकार्यहरू र वाहनको बलियो प्रस्तुतीकरण आफैलाई कन्फिन्सन गर्नुहोस् र तपाईंको वरपर खेल्ने ठाउँ जान्न पाउनुहोस्। ट्रक्टरको साथ तपाईं आफ्नै खेत सुरु गर्न सक्नुहुनेछ, बिहानको गायहरूलाई ड्राइभ गर्नुहोस् वा लंचमा क्षेत्रमा भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। स्थिर अगाडि बाल्टी पनि भारी कामहरू सँभाल्न सक्षम छ, जस्तै ठूलो लोड रेत, लिफ्टिंग र कम हुँदै, र यातायात।
तपाईंको खेत, सँगै LENA Worxx ट्रयाक्टरको साथ, एकदम खुशी हुनेछ, चाहे एक्लो वा साथीहरूको साथ। अर्को पटक, बागबजार ट्रयाक्टर स्यान्डबक्समा लिनुहोस्, नयाँ विकल्पहरू बारे जान्नुहोस्, र ट्रक्टरले तपाईलाई यसको सुविधाहरू प्रदान गर्न के छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई धेरै रमाइलो चाहन्छौं!
दर्जा: 5.0/ 5। 1 मतदान बाट।
अघिल्लो लेखअलसी तेल